"Nguva Yekuzvisarudzira", Imba Yekupayona Iri Pasi Pefotographic Documentary | JK Lien Dhizaini - Yakanakisa Kitchen Faucets 2021 | Yakanakisa Bathroom Faucets | WOWOW Faucets
musha / Interior design / "Nguva Yekusarudza", Iyo Piyona Clubhouse Pasi Pemifananidzo Zvinyorwa | JK Lien Dhizaini
2021 / 08 / 13 kupatsanuraInterior design 3302 0
“Kupayona Clubhouse Munguva Inokosha”
Panzvimbo pokubvisa zvisaririra zvevanhu uye kupatsanura zvivakwa kubva munzvimbo dzavanogara, Iwan Baan anotarisa pakuratidzira kubatana kuri pakati pekuvakwa nevanhu nekusanganisa rondedzero yezvinyorwa zvinyorwa nekutora zvivakwa: zvinoita sei pamwe uye zvinokanganiswa nazvo.
Kudzoka mukutanga kwezana ramakore makumi maviri, Corbusier akanyora muTowards a New Architecture, "Architecture ndiko kuita kwemamwe mabara akapenya muchiedza zvakajeka, nenzira kwayo uye nehungwaru." Architecture uye kutora mifananidzo zvinosangana zvakafanana pfungwa uye chirevo chedenga, kuburikidza nekubviswa kwechiedza nemumvuri, mukuyedza kuzadzisa mweya wehurongwa, kubatana kwechinangwa.
Pfungwa ye "The Decisive Moment" (Iyo Inotungamira Nguva) nemutori wemifananidzo wechiFrench Henri Cartier-Bresson inopindirana mune chimwe chidimbu: chirevo chepakutanga chekutora mifananidzo chiri mukutonhora kwenguva nenzvimbo. Vanhu vanowanzo fadzwa nekukanganiswa kwechimiro chechimiro chakagadzirwa nekanguva.
(Shure kwaSt. Lazare Station, Paris, 1932)
Pasina kuidadisa sekuparadza kana kuidhimoni sechirevo chechokwadi, isu tinongo tarisa zvine hungwaru nzvimbo inovakwa nemifananidzo. Nekutonhodza kumeso kwechivako, zvinopa nzvimbo iyo pfungwa yemuviri. Pasi poruoko rwemugadziri JK Lien, kirabhu yemapiyona yakazvimiririra ye670㎡ muShanghai, Mirror View Image, iri kubika chinyararire, kuumbiridza uye kukura.
Mirror - Spatial inogadzirisazve pasi penyaya yazvino
▲ Isati yagadziriswa
Ini ndinotenda kuti chinangwa chekuvakazve hachisi chekudzokorora zvekare.
asi kuchidudzira zvakare.
Chiitiko chitsva chaLouis Kang chinofungisisa nzira yekudzoreredza zvivakwa zveguta nezvinhu zvemazuva ano uye nehunyanzvi mumamiriro ezvinhu emazuva ano, asi pasina kuwira mumhando dzechinyakare. Mugadziri aida kutsvaga fomu yemudhorobha uye mutauro wekuvaka kuti udzore nzvimbo yepasi, zvichibva pakuremekedza saiti yacho pachayo, iko kuvaka chaiko uye ruzivo rwechokwadi rwekubatanidza chivakwa neguta uye nenguva.
Iyo dome siringi yeiyo yega kamuri yakafanana nekamera shutter, isina kusimba, pendi mufananidzo unonanga wakananga kune yakaoma yakaoma yemukati nyika. Kunze kwekuratidzira pamuvaraidzo wemuridzi, inoisawo toni kune ese nzvimbo pfungwa - "kutora mifananidzo" seimwe yezvinhu zvepakati inoshandiswa mukati mese.
Icho chivakwa chikuru chine denderedzwa repodium. Izvo zvakapfuura zvechivakwa zvinopa mugadziri kanivhasi yakanyorwa uye yakamisikidzwa, uye boka rine nyonganiso yezvivakwa rinotenderera naro. Nekuenzanisa uye kugadzirisa zvakare iyo façade uye nzvimbo dzemukati, dhizaini anoshandisa anoshamisa angles, nziyo uye ingangoita cubist girazi mutauro kuti awane ideology inodiwa munzvimbo dzepasichi nzvimbo yezvivakwa zvakavakwa zvivakwa uye zvinyengeri kuzvisanganisa pamwechete.
Akabvisirwa zvepanyika chaipo, mugadziri akafanana nemubati wemifananidzo, achishandisa nzvimbo yakaoma sechirevo chemudziyo wemifananidzo, kurodha zvakanyorwa pazasi nezve budiriro, nezve mifananidzo uye nezve nguva. Iyo yakazara yekuvaka nzvimbo yeiyo purojekiti ndeye 670 mativi emamita, yepasi pasi ndiyo horo yekugamuchira, nzvimbo yemvura bar, makamuri akazvimirira uye studio yekutora mifananidzo; paburiro repiri inzvimbo yehofisi.
Zvekare uye zvitsva zvinhu zvechivakwa zviri muchiyero pamwe nemumwe, uye mugadziri anoedza kuchengetedza uye kudzoreredza yakabatana nzvimbo yemamiriro ekurongeka. Izvi zvinotsanangurwa chaizvo naVittorio Gregotti: Mazwi ese aya anofungidzira - kunyangwe akashandurwa kana kwete - kuti nharaunda yakatovapo inofanirwa kuchengetedzwa, kuti inofanirwa kuchengetedza ndangariro yekuvakwa kwayo nekuchengetedza zvisaririra zvemuviri wayo. ”
Kutora mifananidzo - kubatwa kwekufemerwa mune yakasarudzika nguva
Izvo zvinyorwa zvekuvakwa, mwenje unofamba-famba mairi
Iko kunzwisisika kwekugadzirwa mushure mekubvisa ruvara
Mune zera remadhijitari kamera, uko shutter iri kukurumidza kupfuura kufunga, iyo nguva mashiripiti ekuvandudza, kugadzirisa uye kuwedzera makamera emamuvhi mune anoonekwa ndangariro mune yerima imba inokosha. Mugadziri anotora kurudziro kubva pane izvi uye anotambanudzira iyo "darkroom" chinhu kune bar nzvimbo. Muchirevo chepantom mirroring, zvishandiso, zvivezwa uye pendi zvinowedzera zvishoma zvenguva-yakarongedzwa kuratidzwa: runyararo rondedzero yemwenje mutsvuku nemumvuri zvinopindirana nekufamba kwekufamba, kuputsa miganhu yenzvimbo. Mvura iri pabhawa iri kunwa, ichiratidza nzvimbo, uye nekunzwa kusinganzwisisike kuyangarara.
“Kunzwa uku kunoshamisa, kutora mufananidzo wechinguvana mushure mekunge ndangariro ichizviratidza zvishoma nezvishoma kuburikidza nemurima. Iyo nguva pandakadzvanya shutter, iyo nguva yekusvetuka inowonekazve. Sezvo munhu akamira muchadenga, pfungwa yenguva inonyangarika uye ndangariro dzinodzoka zvakare. ” - anodaro mugadziri JK Lien
Muna 1827, Niepce paakaisa ndiro yesimbi yakasungwa-asphalt mubhokisi rakasviba iro lenzi rakatarisa panze nepahwindo. Mushure memaawa masere ekuratidzwa uye kugadzirwa kwemafuta elavender, mufananidzo wekutanga wakatorwa nemurume wakazove unoonekwa. Sezvo nhoroondo inoshanduka, dhizaini, vanhu, nzvimbo uye nguva zvishoma nezvishoma inovaka mana-mativi resonance. Uye kwenzvimbo yekutora mifananidzo, maitiro ekuratidzira hushamwari-mativi hukama mune maviri-mativi emifananidzo akatanga kuve tarisiro.
Walter Benjamin akanyora muA Short History of Photography, "Basa reunyanzvi, chivezwa, uye kunyanya dhizaini, zviri nyore kunzwisisa nekutarisa pikicha yekugadzira pane kutarira chinhu chinoonekwa." Izvi zvinowirirana nepfungwa yaBresson yekuratidza kugona kwemifananidzo yekutora zvivakwa mune yakasarudzika mamiriro mune 'yekupedzisira nguva'. Mugadziri anoshuvira kugadzirisa chaiyo nguva munguva, kuti awane yakasarudzika uye yakasarudzika nguva mune yemazuva ese ezvivakwa. Denga, mwenje, kumisikidzwa, chiyero, zvishandiso, zvese izvi zvinounganidzwa uye zvinombundirwa chimwe nechimwe.
Nguva - iyo yekuvaka ndangariro pasi pe surrealism
Kubva pamaonero ehurefu hwenguva, nguva ingori chinguva
Asi chipfupi chezvinhu chakabatana zvakanyanya
Mune chamupupuri chekumirira kuti firimu igadziriswe, nguva yakatambanudzwa, ine zvakavanzika uye kutarisira. Kunyangwe kutora mafoto, senge chero imwe nzira yekuratidzira pasi rose, isingakwanise kuve nechinangwa, zviri pachena kuti ndiyo yepedyo fomu yekurangarira uye inoratidza zvimwe zve surreal zvemusoro wenyaya: zviitiko zvese zvinoita kunge zviri kunze kweichoicho, asi zvinhu izvo zvinoumba iwo anozivikanwa maonero - kongiri, simbi, dehwe - ese anova akanyarara anoonekwa zviratidzo pano. Dzese dzinova zvinyararire zviratidzo zvekuona.
“Nzvimbo haitsanangurike pasina kutaurwa nezvenguva.
Pasina nzvimbo sereferenzi, nguva haina kujekeswa. ”
Kana nzvimbo ichifamba ichibva kune yepanyama ichienda kune iyo nyika yekuziva, mune zvinoshamisa kubva kuna Heidegger "kuvapo kamwe" kune Merleau-Ponty "akawanda maonero". Pfungwa yenzvimbo inowedzera kudzikira uye hukuru hwenguva hwakareba. Isolated, yakavharwa uye isina kubatana kubva kune yekunze nyika, chivakwa ichi chakaita hombe rima kamuri, uye izvo zvinhu zvakaita semakemikari reagents. Mugadziri anoshandisa hunyanzvi hwekutora mifananidzo kuti atarise pane kutakurwa kwenguva ndangariro mukumirira kwenguva refu. Maitiro ekuumba iyi maitiro ekuchinja kwemaumbirwo kubva munzvimbo kuenda kunguva.
Kubata nguva nezvine chirevo. Zvemukati zvinofanirwa kuratidzwa zvinosarudzwa mune imwe nzvimbo uye zvakapfekedzwa nenzira dzepanyama, zvinogadzira mufananidzo wehunyanzvi neakakwana chimiro chemweya uye zvakakosha kukosha. Murwizi rwezvakaitika uye nerazvino, kune avo vanoona iyo nzvimbo, vanogona kuve neyavo-yekuzvigadzira uye yekupayona nhaurirano nemifananidzo chero nguva.
X Axonometric kudhirowa
Zita rePurojekiti: Mirror Image Yakavanzika Kirabhu
Yakaomesesa yekushongedza dhizaini: Da Guan - Zicheng International Space Dhizaini
Dhizaini yekugadzira nyoro: Grand View-MaoYue Yepasi Pose Kushongedza Dhizaini
Dhizaina Dhizaina: JK Lien
Purojekiti Nzvimbo: Shanghai
Zuva rokupedzisa: 2021
Dhizaini Nzvimbo: 670㎡
Mufananidzo: Sui Sicong
Muvambi uye dhizaina director weDa Guan -Kuzvimiririra-Yakagadziriswa International Space Dhizaini, muvambi uye dhizaina director weDa Guan-Mao Yue International Kushongedza Dhizaini, Master weDhijitari Management kubva kuDe Montfort University, UK, uye mutungamiri wekutanga we Heart + Design Chikoro. Iye anotenda kuti "Hupenyu chiratidzo, chishuwo, adream." JK Lien, dhizaina kubva kuTaipei, Taiwan, China, akapedza kudzidza kuMa Design Management, De Montfort University, UK, uye akatanga Da Guan mu1999 muShanghai. Akavamba Da Guan International Space Dhizaina muna 1999 muShanghai. Mr. Lien mugadziri anobva kuTaipei, Taiwan, China.
Dhizaini yaVaLian inotarisana neEELITE, ARCHITECTURE, ARTISTIC uye CUSTOMIZATION, ichisimbisa iko kusanganisa kwakakwana kwetsika nehunhu, uye kukurudzira chimiro chiri nani kune dhizaini yehupenyu. Kubva payakagadzwa, yakagadzira mukurumbira wakanaka mumahotera ane nyeredzi shanu, dzimba dzoumbozha, makirabhu, dzimba dzemhando yepamusoro, dzimbahwe remakambani, nzvimbo dzekutengesa, nezvimwe.
Pakapfuura :: 90 Square Mamita Chic Chimiro Yakanaka Imba, Retro Yemahara Kutaurisa Kwakanyanya Kunyaradza | Kugara Kugadzira Zvadaro: Deconstructionism, Yakachena Space YeRusununguko Uye Spontaneity